ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို (ဘေးဧရိယာ) မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ အချိန်အပြောင်းအလဲ နှင့် လမ်းညွှန်ထုတ်ပြန်ခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် 2335 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94118 ရှိ University of San Francisco – War Memorial Gym ၌ ကျင်းပမည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို (ဘေးဧရိယာ) မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချိန်ပြောင်းလဲထားပါသည်။
အခမ်းအနား ကျင်းပချိန်မှာ နံနက် ၉း၁၅ နာရီမှ ၁၀း၄၅ နာရီအထိ ဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားကျင်းပရာ ခန်းမကို နံနက် ၇း၀၀ နာရီမှ ၈း၄၅ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်၍ ဧည့်ပရိသတ်များ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခန်းမတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်နောက်ကျမှ ရောက်ရှိလာသူများ ၀င်ခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အခမ်းအနားသို့ လာရောက်သူများ အဆင်ပြေစွာ လာရောက်နိုင်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်များကိုလည်း ပူးတွဲ ဖော်ပြထားပါသည်။ ကားရပ်နားရန်နေရာများ အခက်အခဲရှိနိုင်သောကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့် လာရောက်သူများအနေဖြင့် နီးစပ်ရာ မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေများ စုပေါင်းလာရောက်ကြရန်နှင့် အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ် ရထားများကို စီးနင်းလာရောက်ကြပါရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ဒေသခံ စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသများရှိ သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ကြပြီး သတင်းမီဒီယာများအနေဖြင့် ကိုတိုးလွင် (၄၁၅ ၄၂၄ ၅၈၁၁ ) နှင့် ကိုဝေဖြိုး (၄၁၅ ၅၇၇ ၆၅၀၅) တို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ။
ကားရပ်နားရန် နေရာ နှင့် ကြိုပို့ အစီအစဉ်များ
အခမ်းအနားဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ကားရပ်နားရန် အောက်ပါနေရာများတွင် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
ပြီးလျှင် ကြိုပို့ယာဉ်များဖြင့် အခမ်းအနားကျင်းပရာနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
၁။ Ocean Beach Public Parking (Free Parking) ကြိုပို့ယာဉ်များ ( Fulton Street & Great Hwy) တွင် ရှိမည်။
၂။ De Young Museum Parking Garage ( Paid Parking) (Maximum $30) ကြိုပို့ယာဉ်များ ( Fulton Stree & 10 th Avenue) တွင် ရှိမည်။
Bart ဖြင့် လာရောက်ပါက Civic Center Bart Station တွင် ဆင်းပြီး
Larkin Street & Fulton Street (Grove Street Between McAllister Street ) စုရပ်သို့ လာရောက်ပါ။ကြိုပို့ယာဉ်များဖြင့် အခမ်းအနားကျင်းပရာ နေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
Directions to the SF Burmese Community Meeting with Daw Suu Event
FROM THE GOLDEN GATE BRIDGETake the Highway 1 / 19th Ave. exit.Makearight on Anza.Make an immediate right on 14th Ave.Makearight on Geary Blvd. (After about2miles)Makearight on Parker.Stay on Parker for3blocks.Makealeft on Golden Gate Ave. You will see the campus on your right.War Memorial Gym is on your right on Golden Gate Ave.
FROM HWY 280 NORTHTake the 19th Ave. exit.Stay on 19th Ave.Makearight on FultonMakealeft on Parker (St. Ignatius church on the corner)Makearight on Golden Gate Ave. You will see the campus on your right.War Memorial Gym is on your right on Golden Gate Ave.
FROM HWY 101 NORTHAs you enter the city limits, follow signs to the Golden Gate Bridge until you reach the Fell St. exit.Follow Fell St. until you reach Masonic Ave.Makearight on Masonic Ave.Makealeft on Golden Gate Ave. You will see the campus on your left.War Memorial Gym is on your left on Golden Gate Ave.
FROM THE BAY BRIDGE (EAST BAY)From the Bay Bridge, follow signs to 101 North until you reach the Fell St. exit.Follow Fell St. until you reach Masonic Ave.Makearight on Masonic Ave.Makealeft on Golden Gate Ave. You will see the campus on your left.War Memorial Gym is on your left on Golden Gate Ave.
Parking at the SF Burmese Community Meeting with Daw Suu Event
Findingaparking spot on the streets will be extremely difficult on the event day as the event venue is located in the City of San Francisco. Public Transportation is highly recommended.
Public Transportation to the SF Burmese Community Meeting with Daw Suu Event
BART (Saturday schedule)
– Take BART to arrive Powell Station (SF) by 8:15am latest– Take Bus (SF MUNI) to USF by 8:30am latest– Walk to USF (5 to 10 minutes) – War Memorial Gymnasium
– In order to catch the Bus schedule, there are Only2BART lines running from East Bay to Daly City on Saturdays. (Other2lines from East Bay do not run until 8:45am.) > Pittsburg/Bay Point to Daly City > Dublin/Pleasanton to Daly City
– Fares: depends on the distance
SF MUNI Bus (Saturday schedule; Outbound towards Ocean Beach)
– There are4available lines from near Powell BART Station to near USF War Memorial Gym >5(From Market & Powell Street to Fulton & Clayton Street) > 31 (From Market & Powell Street to Turk & Roselyn Street) > 21 (From Market & Powell Street to Hayes & Clayton Street) > 38 (From Geary & Powell Street to Geary & Collins Street)
– Fares (Exact Change Required. No change given or No refunds provided for overpayment) > $ 2.00 – Adult > $ 0.75 – Senior (age 65 or Older) > $ 0.75 – Youth (between ages5and 17)
SF Taxi Services (Call 415 333 3333 for Yellow Cab)